“Dɔ Wo Yɔnko Sɛ Wo Ho” | Adesua
‘Ahyɛde a ɛto so mmienu ne sɛ, “Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho.”’—MAT. 22:39.
Hena paa ne yɛn yɔnko?
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa? Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
Ɔdɔ ho asɛm bɛn na ɛwɔ 1 Korintofo 13:4-8?
1, 2. (a) Ahyɛde a ɛto so mmienu a Yesu kae sɛ ɛyɛ kɛse no ne nea ɛwɔ he? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho?
NA Farisini bi pɛ sɛ ɔsɔ Yesu hwɛ, enti obisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, Mmara no mu ahyɛde bɛn na ɛyɛ kɛse?” Yesu kae sɛ: “Fa wo koma nyinaa ne wo kra nyinaa ne w’adwene nyinaa dɔ Yehowa wo Nyankopɔn.” Asɛm a edi eyi anim no ma yehuu nea eyi kyerɛ. Bio, Yesu kyerɛɛ ahyɛde a ɛto so mmienu a ɛyɛ kɛse. Ɔkae sɛ: “Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho.”—Mat. 22:34-39.
2 Yesu kae sɛ yɛnnɔ yɛn yɔnko te sɛ yɛn ho. Ɛnde, asɛm no ne sɛ, hena paa ne yɛn yɔnko? Dɛn na yɛde bɛkyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko?
3, 4. (a) Mfatoho bɛn na Yesu de dii dwuma de kyerɛɛ nea ɔyɛ yɔnko ankasa? (b) Dɛn na Samariani bi yɛ de boaa ɔbarima a akorɔmfo gyee ne ho nneɛma na wɔbobɔɔ no gyaw no too kwankyɛn baabi no? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
3 Ebia yɛn adwene bɛyɛ yɛn sɛ, sɛ yɛka ɔyɔnko a, ɔno ne obi a ɔte bɛn yɛn anaa yɛn fipamfo a ɔboa yɛn. (Mmeb. 27:10) Ɛnde, hwɛ asɛm a Yesu kae bere a ɔbarima bi bisaa no sɛ: “Hena ne me yɔnko ankasa?” Yesu ammua asɛm no tee, mmom ɔde mfatoho kyerɛkyerɛɛ mu. Mfatoho no fa Samariani yamyefo bi ho. (Monkenkan Luka 10:29-37.) Akorɔmfo gyee Yudani bi ho nneɛma nyinaa bobɔɔ no na wogyaw no too kwankyɛn baabi kɔe. Ankyɛ na Israelni sɔfo bi yii ne ti; ɔbɛboa no anaa? Hwim, watwam kɔ. Lewini bi nso abedu hɔ; ɔno nso aman afa baabi kɔ. Nnipa a yesusuw sɛ wɔyɛ yɔnko pa no ammoa barima a wapira no. Nanso bere a Samariani bi bɛtoo no no, ɔboaa no. Na Samariafo gye Mose Mmara no tom, nanso na Yudafo ne wɔn nka.—Yoh. 4:9.
4 Samariani no hwiee ngo ne nsa guu papa no kuro so sɛnea ebewu ntɛm. Afei ɔde no kɔɔ ahɔhodan bi mu, na ɔmaa nea ɔhwɛ hɔ no denare mmienu sɛ ɔnhwɛ barima no. Na denare mmienu yi yɛ obi nnanu akatua. (Mat. 20:2) Ebesi ha yi, ɛnyɛ den koraa sɛ yebehu onii a ɔkyerɛe sɛ ɔyɛ yɔnko pa. Yesu mfatoho yi kyerɛ yɛn sɛ yɛmma yɛn yam nhyehye yɛn mma yɛn yɔnko nnipa na yɛnnɔ wɔn.
Yehowa nkoa ntwentwɛn wɔn nan ase sɛ wɔbɛkyerɛ yɔnkodɔ (Hwɛ nkyekyɛm 5))
5. Bere a atoyerɛnkyɛm bi sii no, dɛn na Yehowa Adansefo yɛe de kyerɛe sɛ wɔwɔ yɔnkodɔ?
5 Nnipa a wɔwɔ ahummɔbɔ te sɛ Samariani no ho yɛ na paa. Ɛnsɛ sɛ eyi yɛ yɛn nwonwa, efisɛ yɛte “nna a edi akyiri mu,” na nnipa pii nni tema, wɔyɛ keka, na wɔmpɛ papa. (2 Tim. 3:1-3) Wo deɛ hwɛ asɛm a esii October 2012 wɔ New York kurow mu. Mframa gyampantrudu bi bɔ faa hɔ, na ɛsɛe nneɛma bebree. Kurow no fã baabi deɛ na anyinam nkanea ne nneɛma foforo nyɛ adwuma, enti na ahokyere wɔ hɔ paa. Nanso saa bere no nkurɔfo tu guu wɔn nneɛma so fae. Bere a nnipabɔnefo yi refom afoforo nneɛma no, Yehowa Adansefo yɛɛ nhyehyɛe boaa wɔn ho wɔn ho, na ebi soo afoforo mpo so. Yɔnkodɔ nti na Kristofo yɛ saa. Ɛnde, dɛn bio na yebetumi ayɛ de akyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko?
NEA YƐBƐYƐ DE AKYERƐ SƐ YƐDƆ YƐN YƆNKO
6. Adɛn nti na asɛnka adwuma no kyerɛ sɛ yɛwɔ yɔnkodɔ?
6 Wo ne wɔn nsusuw Bible mu nsɛm ho. Sɛ yɛyɛ asɛnka adwuma no a, ɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ nnipa nya “Kyerɛwnsɛm no mu awerɛkyekye.” (Rom. 15:4) Sɛ yɛka Ahenni no ho asɛmpa kyerɛ afoforo a, ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ yɔnkodɔ. (Mat. 24:14) ‘Onyankopɔn na ɔma anidaso,’ na ɛyɛ akwannya kɛse sɛ yɛbɛka n’Ahenni no ho asɛm akyerɛ afoforo.—Rom. 15:13.
7. Asɛm bɛn na Yesu kae? Sɛ yedi so a, nhyira bɛn na yebenya?
7 Nya tema ma afoforo. Yesu kae wɔ ne Bepɔw so Asɛnka no mu sɛ: “Biribiara a mopɛ sɛ nnipa nyɛ mma mo no, mo nso monyɛ wɔn saa ara; nokwarem no, saa na Mmara ne Adiyifo no kyerɛ.” (Mat. 7:12) Sɛ yɛka “Mmara” no a, ɛkyerɛ Genesis nhoma no kosi Deuteronomium nhoma no, na “Adiyifo” no nso gyina hɔ ma nkɔmhyɛ nhoma a ɛwɔ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu. Yehowa de “Mmara” ne “Adiyifo” no maa ne nkurɔfo efisɛ ɔdɔ wɔn. Saa ara na ɔpɛ sɛ yɛn nso yɛdɔ yɛn yɔnko. Yehowa nam Yesaia so kae sɛ: “Mummu atɛntrenee na monyɛ adetrenee.” Na ɔtoaa so sɛ, ‘Onipa a obedi eyinom so no ani begye.’ (Yes. 56:1, 2) Anokwa, yɛn ani gye efisɛ yɛwɔ yɔnkodɔ, na yɛde Yesu asɛm no bɔ yɛn bra.
8. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛdɔ yɛn atamfo, na dɛn na ebetumi afi mu aba?
8 Dɔ w’atamfo. Yesu kae sɛ: “Motee sɛ wɔkae sɛ, ‘Dɔ wo yɔnko na kyi wo tamfo.’ Nanso, mise mo sɛ: Monkɔ so nnɔ mo atamfo na mommɔ mpae mma wɔn a wɔtaa mo, na moakyerɛ sɛ moyɛ mo Agya a ɔwɔ soro no mma.” (Mat. 5: 43-45) Ɔsomafo Paulo nso de afotu a ɛte saa mae. Ɔkae sɛ: “Sɛ ɔkɔm de wo tamfo a, ma no biribi nni; sɛ osukɔm de no a, ma no biribi nnom.” (Rom. 12:20; Mmeb. 25:21) Yehowa de ahyɛde a ɛte saa kaa Mose Mmara no ho. Ɔkae sɛ: “Obi a ɔtan wo mpo, sɛ wuhu sɛ n’afurum hyɛ n’adesoa ase wɔ fam a, ntwa ne ho nkɔ. Boa no na ɔnsan no.” (Ex. 23:5) Hwɛ sɛ obi ne ne tamfo nyinaa de afotu yi reyɛ adwuma! Ɛrenkyɛ na wɔato abasakɔnmu. Sɛ Kristofo dɔ wɔn atamfo a, ɛboa ma wonya yɛn ho adwempa. Wo deɛ hwɛ sɛ wɔn a wɔretaa yɛn no bi abegye nokware no! Hwɛ sɛnea yɛn ani begye afa!
9. Dɛn na Yesu kae sɛ yɛnyɛ na asomdwoe atena yɛne yɛn nua ntam?
9 “Monyɛ nea ɛbɛma asomdwoe atena mo ne nnipa nyinaa ntam.” (Heb. 12:14) Sɛ wotu yɛn fo sɛ yɛne nnipa nyinaa ntena asomdwoe mu a, ɛnde yɛn nuanom Kristofo ɛ? Ɛno deɛ, yɛnna nka mpo. Yesu kae sɛ: “Sɛ wode w’akyɛde reba afɔremuka ho na wokae wɔ hɔ sɛ wo nua wɔ biribi tia wo a, gyaw w’akyɛde no afɔremuka no anim na kɔ; di kan ne wo nua no nkosiesie mo ntam, na sɛ wosan ba a, woabɛbɔ w’afɔre.” (Mat. 5:23, 24) Sɛ nsɛmnsɛm wɔ yɛne yɛn nua bi ntam a, ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ yɛn dɔ na yesiesie asɛm no ntɛm. Sɛ Onyankopɔn hu sɛ yɛpɛ sɛ asomdwoe tena yɛne yɛn nuanom ntam a, obehyira yɛn.
10. Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ho atemmufo?
10 Nyɛ wo ho ɔtemmufo. Yesu kae sɛ: “Munnyae atɛn a mubu nkurɔfo no na wɔammu mo atɛn; atɛn a mubu no, ɛno ara na wobebu mo; susukora a mode susuw ma nkurɔfo no, wɔde besusuw ama mo. Ɛnde, dɛn nti na wohwɛ ntɛtɛwa a ɛda wo nua aniwa so, na wunhu mpuran a ɛda w’ankasa aniwa so? Anaasɛ wobɛyɛ dɛn atumi aka akyerɛ wo nua sɛ, ‘Ma minyi ntɛtɛwa no mfi w’aniwa so’; bere a, hwɛ! mpuran da w’ankasa aniwa so? Nyaatwomni! Di kan yi w’ankasa aniwa so mpuran no, na wubehu sɛnea wubeyi ntɛtɛwa no afi wo nua aniwa so.” (Mat. 7:1-5) Asɛm no mu da hɔ fann. Ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si mfomso nketenkete a yɛn nuanom di so na yɛka ho asɛm. Wobɛhwɛ mpo no na yɛn deɛ na ɛsõ.
ƆKWAN TITIRIW A YƐNAM SO KYERƐ YƐN DƆ
11, 12. Ɔkwan titiriw bɛn na yɛnam so kyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa?
11 Yebetumi ayɛ nneɛma pii de akyerɛ yɛn dɔ. Nanso Yesu ma yehu sɛ ɔkwan titiriw a yɛnam so kyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa ne sɛ yɛbɛka Ahenni ho asɛmpa no akyerɛ wɔn. (Luka 8:1) Yesu ka kyerɛɛ n’akyidifo sɛ ‘wɔnkɔ nkɔyɛ aman nyinaa n’asuafo.’ (Mat. 28:19, 20) Sɛ yedi saa ahyɛde yi so a, yebetumi aboa nnipa pii ma wɔafi ɔkwan kɛse tɛtrɛɛ a ɛkɔ ɔsɛe mu no so na wɔafa ɔkwan hihiaa a ɛkɔ nkwa mu no so. (Mat. 7:13, 14) Nokwasɛm ne sɛ, sɛ yesi nketekrakye sɛ yɛbɛyɛ adwuma yi a, Yehowa behyira so.
12 Yesu boaa nkurɔfo ma wohui sɛ ɛsɛ sɛ wɔma Yehowa kyerɛ wɔn kwan. Saa ara na yɛreyɛ nnɛ. (Mat. 5:3) Sɛ nnipa yɛ aso ma yɛn a, yɛka “Onyankopɔn asɛmpa” no kyerɛ wɔn. (Rom. 1:1) Wotie Ahenni ho asɛmpa no a, yɛkyerɛ wɔn ma wohu sɛ Yesu afɔrebɔ no nti, wobetumi anya Onyankopɔn anim dom na wɔabɛyɛ wɔn adamfo. (2 Kor. 5:18, 19) Enti sɛ yɛka asɛmpa no a, na yɛreda no adi paa sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa.
13. Sɛ woyere wo ho yɛ asɛnka adwuma no bi a, ɛka wo sɛn?
13 Sɛ yesiesie yɛn ho yiye kɔyɛ sankɔhwɛ ne Bible adesua a, yebetumi aboa nkurɔfo ma wɔde Onyankopɔn asɛm abɔ wɔn bra. Ebia wɔn mu bi bɛyɛ nsakrae pii. (1 Kor. 6:9-11) Sɛ yehu sɛ Onyankopɔn reboa “wɔn a wɔpɛ daa nkwa” ma wɔayɛ nsakrae de wɔn ho abɛbata ne ho a, yɛn ani gye paa. (Aso. 13:48) Ná nnipa pii nni anidaso biara, nanso bere a wofii ase suaa Bible no, abasamtu dan anigye. Wɔn nso a bere bi na dadwen ahyɛ wɔn so no de wɔn werɛ ahyɛ yɛn soro Agya no mu, enti wɔnteetee bio. Hwɛ sɛ saafo yi aba asafo no mu na wɔrennya nkɔso! Ɛyɛ anika kwa. Wunnye nni sɛ ɛyɛ nidi kɛse sɛ yɛbɛka Ahenni ho asɛmpa no de akyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa?
BIBLE MA YEHU NEA ƆDƆ KYERƐ
14. Ɔdɔ ho asɛm bɛn na Paulo kae wɔ 1 Korintofo 13:4-8?
14 Paulo ma yehu nea ɔdɔ kann kyerɛ. Sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko sɛnea ɔkae no a, yebenya Yehowa anim dom. Bio nso ebeyi akameakame pii afi hɔ na yɛn koma ani agye. (Monkenkan 1 Korintofo 13:4-8.) Ɛnde, momma yɛmpɛɛpɛɛ Paulo asɛm no mu kakra na yɛnhwɛ akwan foforo a yɛbɛfa so akyerɛ yɔnkodɔ.
15. (a) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yenya abotare na yɛda ayamye adi? (b) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yeyi ahoɔyaw ne ahantan fi yɛn akwan mu?
15 “Ɔdɔ wɔ abodwokyɛre na ne yam ye.” Yɛn sintɔ nyinaa akyi no, Yehowa wɔ yɛn ho abotare na oyi ne yam boa yɛn. Enti sɛ afoforo fom yɛn a, ɛsɛ sɛ yenya wɔn ho abotare. Sɛ mpo wɔkasa tia yɛn anaa wobu yɛn animtiaa a, ɛnsɛ sɛ yɛtwe no tann. Bio “ɔdɔ nyɛ ahoɔyaw.” Ebia yɛn nuanom wɔ hokwan bi wɔ asafo no mu, anaa wɔwɔ nneɛma bi a yenni. Sɛ yɛdɔ wɔn paa a, yɛn ani remmere nea wɔwɔ. Afei ɛnsɛ sɛ yetu yɛn ho anaa yɛhoman, efisɛ ɛnkyerɛ ɔdɔ. Bible ka sɛ: “Ahantan aniwa ne ahantan koma ne abɔnefo kanea yɛ bɔne.”—Mmeb. 21:4.
16, 17. Ɔkwan bɛn so na yebetumi de asɛm a ɛwɔ 1 Korintofo 13:5, 6 ayɛ adwuma?
16 ‘Ɔdɔ nyɛ ade a ɛnsɛ.’ Sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko a, yenni atoro nkyerɛ no, yenwia n’ade, na yɛnnyɛ biribiara a ɛbɛto Yehowa mmara. Bio nso Kristofo nyɛ pɛsɛmenkominya, efisɛ ‘ɔdɔ nhwehwɛ nea n’ankasa hia.’ Enti momma afoforo ho asɛm nhia yɛn.—Filip. 2:4.
17 Ɔdɔ kann “bo nhaw no.” Afei “ɛmfa bɔne nhyɛ ne mu” te sɛ nea yɛayi nhoma bi ato hɔ rekyerɛkyerɛw nea afoforo ayɛ atia yɛn wom. (1 Tes. 5:15) Onyankopɔn ani nnye ho sɛ yɛde afoforo ho nsɛm bɛhyɛ yɛn mu. Sɛ yenya afoforo ho menasepɔw a, ɛte sɛ gyentia a yɛakeka asi anim; ɛreyɛ ara ni na ɛredɛw. Eyi betumi apira yɛne afoforo. (Lev. 19:18) Ɔdɔ nti yedi nokware ho ahurusi, na ‘yenni nea ɛnteɛ ho ahurusi.’ Enti sɛ obi a ɔtan yɛn mpo ho ka mu anaa obi sisi no a, yenni ho ahurusi nka sɛ, ‘Ɔtwea, nea ɛsɛ wo ara ni.’—Monkenkan Mmebusɛm 24:17, 18.
18. Ɔdɔ ho asɛm bɛn na ɛwɔ 1 Korintofo 13:7, 8?
18 Hwɛ nneɛma foforo a Paulo kyerɛw faa ɔdɔ ho. Ɔkae sɛ ‘ɔdɔ tɔ ne bo ase biribiara mu.’ Sɛ obi fom yɛn na ɔsrɛ bɔne fafiri a, ɔdɔ nti yɛde kyɛ no. Bio Paulo kae sɛ ‘ɔdɔ gye biribiara di.’ Ampa, yegye nea Bible ka biara di, na yɛn ani sɔ honhom fam nneɛma a Yehowa ahyehyɛde no de ma yɛn. Afei ‘ɔdɔ wɔ biribiara mu anidaso.’ Yɛwɔ anidaso efisɛ yegye biribiara a Bible ka di. Ɔdɔ na ɛka yɛn ma yɛboa afoforo ma wohu nea enti a yɛwɔ anidaso a ɛte saa. (1 Pet. 3:15) Sɛ yɛkɔ ahohia mu a, yɛbɔ mpae na yɛwɔ anidaso sɛ nneɛma bɛkɔ yiye. Ɔdɔ ‘gyina biribiara ano.’ Sɛ obi na wayɛ biribi atia yɛn oo, ɔtaa na yɛrefa mu oo, biribiara a ɛbɛto yɛn biara, yegyina ano. Ne korakora no, “ɔdɔ to ntwa da.” Anokwa, nnipa ahobrɛasefo benya hokwan ada ɔdɔ adi afebɔɔ!
KƆ SO ARA DƆ WO YƆNKO SƐ WO HO
19, 20. Bible mu afotu bɛn na ɛsɛ sɛ ɛka yɛn ma yɛkɔ so ara dɔ yɛn yɔnko nnipa?
19 Sɛ yɛde Bible mu afotu yɛ adwuma a, yɛbɛkɔ so ara adɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho. (Mat. 22:39) Yehowa ne Yesu hwɛ kwan sɛ yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nnipa. Sɛ Bible ka sɛ yɛnnɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho a, yenyi ɔtwe nyi adowa; yɛdɔ nnipa nyinaa. Ɛnyɛ wɔn a wɔka yɛn kasa nko ara na ɛsɛ sɛ yɛdɔ wɔn. Sɛ biribi nti ɛyɛ den ma yɛn sɛ yɛbɛdɔ obi a, momma yɛmmɔ Onyankopɔn mpae na ɔmfa ne honhom kronkron mmoa yɛn. Yɛyɛ saa a, Yehowa behyira yɛn na yɛafa ɔdɔ kwan so.—Rom. 8:26, 27.
20 Bible frɛ ahyɛde a wɔde ama yɛn sɛ yɛnnɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho no “mmara titiriw.” (Yak. 2:8) Paulo bobɔɔ ahyɛde ahorow bi a na ɛwɔ Mose Mmara no mu, na ɔkae sɛ: “Mmara asɛm foforo biara a ɛwɔ hɔ no, wɔabɔ no mua wɔ asɛm yi mu sɛ, ‘Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho.’ Ɔdɔ nyɛ ne yɔnko bɔne; enti ɔdɔ ne mmara no awiei.” (Rom. 13:8-10) Ɛnde, yɛreka na yɛaka no sɛn? Ɛyɛ tiawa: Ɛsɛ sɛ yɛkɔ so ara kyerɛ yɔnkodɔ.
21, 22. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛdɔ Onyankopɔn ne yɛn yɔnko nnipa?
21 Ade baako nso a ɛbɛboa yɛn na yɛakɔ so ara adɔ yɛn yɔnko nnipa ne sɛ yebesusuw Yesu asɛm bi ho. Ɔkae sɛ n’Agya ma “n’awia pue nnipa bɔne ne nnipa papa so na ɔma osu tɔ gu treneefo ne abɔnefo so.” (Mat. 5:43-45) Nea Yesu reka ara ne sɛ, treneefo oo, abɔnefo oo, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn dɔ so obiara so. Yɛadi kan aka sɛ ɔkwan titiriw baako a yɛfa so kyerɛ yɛn dɔ ne sɛ yɛbɛka Ahenni no ho asɛmpa. Wo deɛ hwɛ sɛ yɛaka asɛm akyerɛ obi na wafi ase de rebɔ ne bra! Hwɛ nhyira a ɛda hɔ retwɛn no!
22 Yɛahu nneɛma pii a enti ɛsɛ sɛ yɛde yɛn koma, yɛn kra, ne yɛn adwene nyinaa dɔ Yehowa. Bio nso yɛahu akwan ahorow a yɛbɛfa so akyerɛ yɔnkodɔ. Sɛ yɛdɔ Yehowa ne yɛn yɔnko nnipa a, ɛkyerɛ sɛ yɛatie Yesu afotu no agu aso pa mu. Na nea ɛsen ne nyinaa ne sɛ yebenya yɛn soro Agya Yehowa anim dom.